Cofttek Naga Saabsan - Kaabista cuntada nafaqada leh ee alaabada ceyriinka ah
Cofttek Holding Xaddidan
Cofttek Holding Limited oo la helay sanadkii 2008, waa shirkad tiknoolajiyad dawooyinka teknoolojiyad sare loogu talagalay isku dhafka wax soo saarka, R&D iyo iibka. Waxay ku taal Luohe Chemical Industry Park, oo u heellan cilmi-baarista iyo horumarinta warshadaha dawooyinka ee horumarsan, iyagoo siinaya alaabooyin cusub iyo adeegyo tayo sare leh oo loogu talagalay warshadaha dawooyinka.
Cofttek ayaa leh masrax sare oo cilmiga bayoolaji ah, tikniyoolajiyadda kiimikada iyo tijaabooyinka falanqaynta, oo diiradda saaraya horumarinta API-yada, dhexdhexaadinta iyo kiimikada ganaaxyada, iyadoo la siinayo adeegyo tayo sare leh CRO, adeegyo CMO iyo adeegyo baaritaanno iyo adeegyo cilmi baaris oo tayo sare leh oo loogu talagalay shirkadaha warshadaha biomedical.
Cofttek waxay leedahay koox maareyn khibrad leh iyo koox heerka koowaad ah R & D, oo ay kujiraan khubaro aad u fara badan oo ku xeel dheer dhinacyada habka farsamaynta dawooyinka iyo baaritaanka tayada dawooyinka. Waxaa si fiican loo yaqaan oo tartan muhiim u ah qaybahaan kiimikada dawooyinka, tikniyoolajiyadda macmalka ah, horumarinta walaxda daawada, bioengineering, iwm. Macaamiisha shirkadda iyo la-hawlgalayaasheeda waxay ka yimaadaan adduunka oo dhan, iyagoo iskaashi dhow la leh shirkado badan oo dawooyinka ku leh Waqooyiga Ameerika, Yurub, Hindiya iyo Shiinaha.
Ku adkaynaya mabda'a "Aasaaska Tayada, Macaamiisha Koowaad, Adeeg Daacad ah, Dheefta Mutual", cofttek Holding Limited. waxay macaamiisha siisaa alaab qancisa iyada oo loo marayo imtixaan dhammaystiran iyo adeeg tayo sare leh.
teknoolojiyad sare ee shirkadda kiimikada kiimikada ee isku dhafka wax soo saarka, R&D iyo iibka.
Waxaan haynaa shaybaarka ugu casrisan iyo qalabka, kooxda adduunka ugu sareysa R & D iyo shaqaalaha maamulka.